Baaxadda khasaarihii dagaalkii shalay ka soo gaadhay maleeshiyadii soo weerartay Ciidamada Qaranka | Somaliland.Org
Baaxadda khasaarihii dagaalkii shalay ka soo gaadhay maleeshiyadii soo weerartay Ciidamada Qaranka
January 27, 2012	Buuhoodle (Somaliland.Org)- waxa si isa soo taraysa u soo baxaya tafaasiisha warar dheeraad ah oo ka soo baxaya khasaarihii dagaalkii shalay ka dhacay deegaanka Sool Joogto oo ku yaala duleedka Magaalada Buuhoodle.
Wararka aanu ka helayno jiidii shalay dagaalkii la isku gabal dhacsaday ka dhacay ayaa shabakada wararka ee Somaliland.Org u xaqiijiyay in Ciidamada qaranku ay si weyn u jabiyeen maleeshiyo nabad diid ah oo soo weeraray kuwaasi oo ay dib ugu celiyeen gudaha magaalada Buuhoodle.
Ciidanka qaranku waxay maleeshiyadii weerarka soo qaaday ay gaadhsiiyeen khasaarihii ugu balaadhnaa waxaana maanta tirada dhimashada ee maleeshiyada lagu sheegay 36 qof, halka 54 kalena dhaawacyo kala duwani soo gaadheen kuwaasi oo loola cararay Magaalooyinka Gaal-kacyo iyo Buuhoodle.
Warku wuxuu intaasi ku darayaa in galabta magaalada Burco la geeyay laba maxbuus oo lagu soo qabtay dagaalkii shalay.
Dhinaca kale, Ciidanka qaranka ayaa la sheegay inay ka dhinteen ilaa 6 askari halka tobaneeye kalena ka dhaawacmeen.Waxa kale oo la sheegay in ciidanka qaranka la qabsaday sadex askari oo midi dhaawac yahay.
Dhinaca kale, Wasiirka Wasaaradda Kalluumaysiga iyo khayraadka badda Somaliland Md. Cabdilaahi, ayaa sheegay inay ka xun yihiin dagaalkii shalay ka dhacay duleedka Buuhoodle, waxaanu tilmaamay in dagaalkaasi aanu ahayn mid laba dhinac ah balse ciidanka qaranka iyo kuwa ka soo horjeedaaba ay wada yihiin Somaliland.
Md. Cabdilaahi Geel-jire oo maanta u waramayay BBC-da waxa uu masuuliyada dagaalkaasi ku eedeeyay inay ka dambeeyeen kooxdii qurbo joogta ahayd ee dhawaan ku shiray degmada Taleex.
Previous PostSomaliland xornimadeedii dagaal ayay kula soo noqotay ictiraafkana wada hadal ayey ku helaysaaNext PostUrurka SOLJA oo urur saxaafeed Somalia ah uga digay inay faro-geliyaan Suxufiyiinta Somaliland	Blog